Jose Mourinho oo si qiiro leh uga hadlay bixitaanka Saaxiibkii Rui Faria? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Jose Mourinho oo si qiiro leh uga hadlay bixitaanka Saaxiibkii Rui Faria?
Published on May 13, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(14-5-2018) Macalinka kooxda Kubada cagta Manchester United Jose Mourinho ayaa markii u horeysey ka hadlay Saaxiibkii ku xigeenkiisii 17 Sano Rui Faria oo lacadeeyey in uu ka dhaqaajin doono Naadiga United.
Jose Mourinho oo shir Jaraa id qabtay Markii ay dhamaatay Cayaartii uu 1-0 kaga badiyey Watford ayaa sheegay in uusan soo qaadan doonin Macalin ku xigeen cusub hadiiba uu waayey Saaxiibkii Rui Faria kaas oo dhawaan ku dhawaaqay in iska Casili doono xilka Macalin ku xigeen ee uu kahayo Manchester United.
Mourinho ayaa shaaca ka qaaday in uu ku xigeenkiisa Noqon doono Maalin un Xiddiga khadaka dhexe ee Manchester United Michael Carrick kaas oo dhawaan ka fariisan doona Cayaarta Kubada Cagta.
Rui Faria oo ahaa ku xigeenka Jose Mourinho 17 kii Sano ee lasoo dhaafay hadana lajooga Manchester United ayaa cadeeyey in uu ka dhaqaajin doono kooxda Maalinka ladheelo Finalka koobka FA Cupka kaas oo la dheeli doonaan Chelsea 19 ka bishaan.